Taratasy John Malala no tsara, Google! | Martech Zone
Alarobia, Oktobra 27, 2010 Alarobia, Oktobra 29, 2014 Douglas Karr
Amin'ity herinandro ity, ny Fitorahana bilaogy ataon'ny orinasa Dummies ' nanjavona an'i Google ny tranokala.
Tsy misy soritra.
Tsy te hanao zavatra mahery aho, ka niandry iray andro. Fofonaina lalina. Mbola tsy misy.
Tamin'izay aho no nanondro lahatsoratra iray izay Google dia mety hanao fanandramana sasany ary mety hisy ny fanovana algorithm. Ny tranonkala sasany dia nahita fiovana lehibe tamin'ny laharam-pahamehany.
Ry Google malala,
Miaraka amin'ny fahefana lehibe dia misy andraikitra lehibe. Fantatro fa teny nalaina avy amin'ny sarimihetsika fotsiny io, saingy geez Google. Tsy dia tsara loatra ny hijereko ny tranokalako miakatra sy milatsaka, sahirana mamantatra olana, manao fanovana, mitazona azy ireo ho malaza sy milahatra tsara. Satria manamafy ny fanatsarana ny motera fikarohana ny bokiko, dia azo itokisana fa ny tranokalako dia manoatra ny hafa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fahombiazako dia mifototra amin'ny fahamarinan-toeranao sy ny kalitaon'ny fifamoivoizana mifandraika aminao alehako.
Raha fintinina, Google, manana fifandraisana mavesatra eto izahay. Mila anao aho. Ataoko izay rehetra angatahinao… manatsara ny tranokalako, misoratra anarana amin'ny Webmasters, mampiasa mahomby ny teny lakile. Tsy manao na inona na inona aho fa mampifaly anao isan'andro… manome ny atiny sy taonina taonina ho an'ireo mpitsidika anao. Inona no azoko ho takalony?
Nandao ahy ianao.
Tsy misy naoty kely fotsiny.
Na dia tsy nanana fampandrenesana tao amin'ny Webmasters aza aho dia nanao fanitsiana tamin'ity tranonkala ity ary nangataka fangatahana fampidirana azy ireo indray. Ny hany hitako fa mety nahatonga ahy tao anaty olana dia ny teny lakile ao anaty lohateny izay tsy naseho (nisy sary teo amin'ny toerany)… ka nesoriko izy io. Heveriko fa tsy ho ampy handaozanao ahy izany, fa iza no mahalala. Tsy hiteny amiko ianao.
Androany, faly aho mahita fa miverina amin'ny laharana farany isika. Mampihomehy, tsy milahatra amin'ny teny lakolosy tokony ho folo aho taloha, fa mitana ny laharana # 1 ho an'ny Blogging ho an'ny orinasa Dummies - mialoha ny Amazon sy Wiley. Tsy noheveriko ho azo natao izany raha jerena ny lazan'izy ireo sy ny backlinks… fa hey. Halaiko izay azoko.
Inona moa fa mbola tsy vonona hisaraka aho ry Google. Misaotra nikarakara. Amin'ny manaraka dia avelao ho ahy ny taratasy malalako John. Io no kely indrindra azonao atao amin'ny vola rehetra nataoko tamin'ity fifandraisana ity.
Tags: de-indexedgoogle webmasterGoogle +dinika |SEO
Fifandraisana endrika, bot ary Spam tsy menatra
Manorata izao Indy
27 Oktobra 2010 à 8:36
Lahatsoratra tsara Doug. Tena mamorona. Raha ny marina dia nanoratra taratasy mitovitovy amin'ny DirecTV aho volana vitsivitsy lasa izay, izaho ihany no nanapaka ny fifandraisana (tsy afaka nahazo famantarana avy amin'ny zanabolana intsony aho). http://writenowindy.blogspot.com/2010/08/i-want-you-back-too-directv-but-we-just.html
Ny foto-kevitry ny taratasy dia fomba tsara hanasongadinana ny fifandraisana manokana azon'ny orinasa atao amin'ny mpanjifa/mpampiasa azy.
27 Oktobra 2010 à 9:14
Heveriko fa tany amin'ny milina fikarohana no nilaza fa nanao zavatra tsy misy dikany ny Google (tsy manana ny maha-mpikambana premium azy hamaky lalindalina kokoa ao amin'ny bilaoginy). Vao iray segondra lasa izay no nanao izany.
Ary amin'ny manaraka, asehoy ny pejy iray manontolo mba hisehoan'ny fijeriko kely aloha 😛 JK.
Fanamarihana ho an'ny tena - atombohy ivelan'ny tranokala manatsara ny famerenako mialoha (farany)
PS - ny fiverenan'ny Google Dance?
27 Okt 2010 amin'ny 12:47 PM
Nanampy pejy vaovao tamin'ny sari-tany aho, tsy nisy fiovana na inona na inona tamin'ireo am-polony maro hafa, ary nandatsaka toerana 3 aho nandritra ny andro vitsivitsy talohan'ny namerenako tsikelikely ahy tany amin'ny toerana nanombohako. Matoky tena, mieritreritra.
28 Oktobra 2010 à 8:13
Ity dia manondro ny olana amin'ny fametrahana ny atody rehetra ao anaty harona SEO. Tsaroako ny nifamaly tamin'ny namana iray taona vitsivitsy lasa izay izay nilaza fa nanome torohevitra ratsy ny olona aho rehefa nilaza tamin'izy ireo fa tokony hividy dokam-barotra, rohy momba ny varotra, ary hanao ireo zavatra hafa rehetra ataontsika mba hahazoana fifamoivoizana ankoatra ny fiankinan-doha amin'ny milina fikarohana. rehefa ny hany tokony hataony dia ny mianatra SEO. Nampiasa ny tenany ho ohatra izy satria nihevitra ny tenany ho manam-pahaizana momba ny SEO ary nahazo vola an-jatony vitsivitsy isan-taona avy amin'ny tranokala e-varotra roa ary nahazo ny fifamoivoizana rehetra avy amin'ny milina fikarohana ary ny ankamaroany dia avy amin'ny Google. Volana vitsivitsy taty aoriana dia nandihy i Google, nanjavona ny filaharany ary nitombo ny orinasany.
Azafady mariho fa tsy milaza aho hoe miantehitra amin'ny SEO fotsiny ianao, fa maro ny olona manao izany.
28 Oktobra 2010 à 8:35
Tamin'ny 28 Oktobra 2010 tamin'ny 9:18 maraina, “Ako”
My Site (tsindrio raha hanova)
28 Okt 2010 amin'ny 7:51 PM
Hugh, tsy afaka nanaiky bebe kokoa aho. Tsy misy orinasa tokony hanana paikady hahazoana tokana!
29 Oktobra 2010 à 6:38
Raha mieritreritra aho fa taona maro lasa izay dia notoriana i Microsoft noho ny fampifangaroana an'i Explorer amin'ny Windows. Hery loatra hoy izy ireo avy eo...
Samy hafa ny fotoana, samy hafa ny toe-tsaina inoako
29 Oktobra 2010 à 7:37
Jacques, mahafinaritra ny mihaino anao, tompoko! Eny, ekeko tanteraka. Manana fanavaozana manerana ny firenena izahay amin'izao fotoana izao mba hisakanana ny banky sy ny orinasa carte de crédit tsy handevina ny orinasa… kanefa avelanay ny ampihimamba toa an'i Google hijoro sy hanaisotra ny orinasa amin'ny valin'ny milina fikarohana. Miara-miasa amin'ny orinasa izahay izay ahafahan'ny fiovana amin'ny algorithm'i Google manodina ny vola miditra isam-bolana amin'ny dolara an'hetsiny. Tsy mampaninona ahy izany rehefa azo antoka… fa ny fahafahana manary olona tsy misy antony dia mety handroaka olona sy handratra orinasa!